Bambalwa omasipala abathole umbiko ohlanzekile | News24
Bambalwa omasipala abathole umbiko ohlanzekile
KUBE kuncane kakhulu ukukhushulwa kwamasokisi kwimiphumela yocwaningo lohulumeni basekhaya yonyaka ka-2015/16, nalapho kube nomasipala abambalwa abathole umbiko ohlanzekile.
Lokhu kuvele embikweni woMcwaningimabhuku Jikelele nokhishwe ngoLwesithathu. Lo mbiko ukhombisa imiphumela yocwaningo komasipala abangu-263 kanye nezikhungo ezingu-51 zomasipala. Lo mbiko ukhombisa ukuthi bangu-14 omasipala abalahlekelwe yimibiko ehlanzekile yabo kanti babe ngu-9 nje kuphela abathole imibiko engenachashazi.
Izifundazwe ezinengxenye enkulu yomasipala abathole imibiko ehlanzekile kubalwa kuzo iWestern Cape (80%), iKwaZulu-Natal (18%) kanye neEastern Cape (16%).
IWestern Cape iyikhuphulile imibiko yayo ehlanzekile eyisusa ku-73% onyakeni odlule kuya ku-80%.
IGauteng kube ukuphela kwesifundazwe esithole umbiko onogcobho esitatimendeni sayo sezimali. UMasipala iMidvaal kube ukuphela kukaMasipala ogcine umbiko ohlanzekile.
I-Eastern Cape, iLimpopo kanye neMpumalanga yizifundazwe ezikhombise ukunyusa amasokisi, kanti iNorth West, iNorthern Cape kanye neFree State yizona izifundazwe ezishaye udaka kunazo zonke ngokwemiphumela. Izinhlelo ezintekenteke zokulawula kwangaphakathi zibe nesandla ekungaphathekini kahle kwezimali komasipala.
UMcwaningimabhuku Jikelele uthatha u-65% wesimo sezimali komasipala njengesikhathazayo futhi esidinga ukungenelela okusheshayo. Lokhu kunyukile uma kuqhathaniswa no-60% owaqoshwa ngo-2014/15. Ukusetshenziswa budlabha kwezimali kunyuke ngo-50% kuya ku-R16.81bn, nokuyisibalo esiphezulu kusukela uMcwaningimabhuku aqala ukugcina amarekhodi.